မကွေးတိုင်းရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာ ရေတွင်း ၁၂၀၀ တူးပြီးရေပေးမယ် အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ
မကွေးတိုင်းရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာ ရေတွင်း ၁၂၀၀ တူးပြီ...
7 ต.ค. 2562 - 11:00 น.
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပွင့်ဖြူ၊ နတ်မောက်၊ အောင်လံအပါအဝင် မြို့နယ် ၅ခုရဲ့ ရေရှားပါးတဲ့ဒေသတွေမှာ ရေတွင်း ၁၂၀၀ တူးပြီး ရေပေးဝေဖို့ စီစဉ်နေတယ်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပွင့်ဖြူ၊ နတ်မောက်၊ အောင်လံအပါအဝင် မြို့နယ် ၅ခုရဲ့ ရေရှားပါးတဲ့ဒေသတွေမှာ ရေတွင်း ၁၂၀၀ တူးပြီး ရေပေးဝေဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းရေးရာကော်မတီထံကသိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၇ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာလည်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းက ရေမရရှိတဲ့ တောင်သူ တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ရေတွင်းတွေတူးပြီးတော့ ရေရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေး မှာလို့ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီအစီအစဉ်ကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ကူညီပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး ဆည်မြောက်နဲ့ ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနက ရေရှားပါးတဲ့ကျေးရွာတွေ၊ သောက်သုံးရေ၊ စိုက်ပျိုးရေအခက်အခဲရှိတဲ့နေရာတွေကို ကွင်းဆင်း စာရင်းကောက်ယူတာတွေကို လုပ်နေတယ်လို့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသက မိုးရွာသီမှာပင် မိုးနည်းလေ့ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အပြင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု ကြောင့် အခုဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း အရင်ထက်ရေရရှိမှု နည်းပါးလာတယ်လို့လည်း ပခုက္ကူဒေသခံတွေ ထံက သိရပါတယ်။
မကွေးတိုင်း ရေကြီးမှု လူ ၃ ယောက်သေဆုံး
အလားတူ မင်းဘူးမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်း မင်းဘူးရဲ့တောင်ဘက်အခြမ်းက တောင်သူတွေက မိုးရေကိုသာ အဓိကအားထားပြီး ယာစိုက်ပျိုးနေကြရတာဖြစ်လို့ အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ မကွေးတိုင်းလွှတ်တော်၊ မင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်၊ အမှတ် ၁၊ ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်စွမ်းရည်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အခုလိုရေတွင်းတွေတူးဖော်တာက ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်တာလို့ သိထားရပြီး၊ တူးဖော်မယ့်မြို့နယ်တွေထဲမှာလည်း မင်းဘူးမြို့နယ်မပါဝင်တဲ့အတွက် ရေတွင်းရရှိရေးလွှတ်တော်တွင်း မေးမြန်းထားတာလည်းရှိတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမား ၁သန်းလောက်သာ တရားဝင်ငွေလွှဲတဲ့ စနစ်ကို အသုံးပြုနေ
ပြည်ပရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ ကိုးသိန်းကျော်သာ ဘဏ်တွေကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတွင်း တရားဝင်ငွေပြန်လွှဲတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေတာကို အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရဲ့ အောက်တိုဘာ ၇ရက်ထုတ် စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။
ပြည်ပမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အရေအတွက်က နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅.၄သန်းလောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကိုးသိန်းလောက်ကသာ တရားဝင်ဘဏ်ကိုသုံးပြီး ငွေပို့ငွေလွှဲပြုလုပ်နေတာကို ဗဟိုဘဏ်နဲ့ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင်းတွေအရ သိရှိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ အလုပ်သမား ၄သန်းကျော်ဟာ တရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်း၊ အရပ်အခေါ်ဟွန်ဒီ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သုံးစွဲပြီး ငွေပို့၊ ငွေလွှဲတွေကိုပြုလုပ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးက မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားတဦး ဘီဘီစီကိုပြောတာကတော့ တရားဝင်ဘဏ်တွေကနေ ငွေသွားလွှဲဖို့အချိန်နဲ့၊ နေရာဒေသ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်အလက်တွေကို နားလည်မှု နည်းပါးတာကြောင့် လွယ်ကူစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ဟွန်ဒီတွေကနေပဲ လွှဲဖြစ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မဲဆောက်မှာ မြန်မာမိသားတစုလုံး အသတ်ခံရ
ပြည်တွင်းပြည်ပ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား များပြား
မြန်မာငွေ ၁၀သိန်းကို ကိုးရီးယားမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီငွေရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်တဲ့ ကိုးသောင်းကနေ၊ တသိန်းကြားကို ဝန်ဆောင်ခအနေနဲ့ ပေးချေရတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင်းတွေအရတော့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကိုးသိန်းတစ်သောင်းကျော်က တစ်နှစ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ကျော်ကိုသာ ဘဏ်ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မိသားစုတွေစီကို ငွေပို့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီပမာဏအရ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အလုပ်သမားတဦးက တစ်လကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၀ ကျော်ကိုသာ မိသားစုထံကို ပြန်ပို့နိုင်တယ်လို့ တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏက အလုပ် သမား ၉သိန်းကျော်က တရားဝင် ဘဏ်ကိုသုံးပြီးပို့ခဲ့ကြတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင်းတွေအရတော့ ၂၀၁၉၊ ဇွန်လအထိ တရားဝင် ပြည်ပကိုစေလွှတ် ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားဦးရေက တစ်သန်းနဲ့ ခြောက်သောင်းထိရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၄သန်းကျော်ကတော့ အလုပ် သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက အလုပ်သမားအဖြစ် အထောက်အထားရရှိထားတာတွေမရှိပါဘူး။
အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
မျက်နှာဖုံးအုပ်ပြီး ဆန္ဒပြတာတွေကို ဟောင်ကောင်မှာ စတင်အရေးယူ
ဟောင်ကောင်မှာတော့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ မျက်နှာကို မဖုံးအုပ်ရဘူးလို့ တားမြစ်တဲ့ ဥပဒေသစ်နဲ့ အရေးယူမှု စတင်ပါပြီ။
အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်နှာဖုံးအပြာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးကတော့ ဒီဥပဒေကို အာခံသွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ရဲနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ တရုတ်စစ်တပ်ကလည်း ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ သတိပေးချက် ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မကြီးကို တရားခံလွှဲပြောင်းမယ့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ရုတ်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုကြရာကနေ ဟောင်ကောင်မှာ ဒီမိုကရေစီပိုရရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတာ လချီ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲက နှိမ်နင်းရာမှာ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် လူ ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်က ဆန္ဒပြမှုကို နှိမ်နင်းရာက တပတ်အတွင်း အနည်းဆုံး ၈ယောက်သေ
ဒါဟာ ၆ ရက်မြောက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီ ၆ ရက်အတွင်းမှာ ရဲတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့် လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အသက်သေဆုံးခဲ့သလို နောက်ထပ် လူ ၆၀၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီသေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ကို အီရတ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်တာပါ။
တဆက်တည်းမှာပဲ အီရတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကမှ လူထုကို သွားလာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ အစိမ်းရောင် နယ်မြေလို့ခေါ်တဲ့ ဘဂ္ဂမြို့ထဲက နိုင်ငံတကာရပ်ဝန်းကို တဖြန်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါပြီ။
အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့ ပဋိပက္ခဟာ ဆာဒါမြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ကားတာယာ တွေကို မီးရှို့၊ ရဲတွေကို မီးရှူးမီးပန်းတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲဘက်ကလည်း ဆန္ဒပြလူစုကို ဖြိုခွဲဖို့ မျက်ရည်ယို ဗုံးတွေနဲ့ ကျည်အစစ်တွေကို သုံးခဲ့ပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုညံ့ဖျင်းတာတွေကို အီရတ် လူငယ် ထုမကျေနပ်ဖြစ်နေကြတာပါ။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မတည်ငြိမ်မှုတွေကတော့ ခေါင်းဆောင်မှု ရေရေရာရာမရှိဘဲ ရှီးယိုက်အများစုရှိရာ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါ။
อัลบั้มภาพ မကွေးတိုင်းရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာ ရေတွင်း ၁၂၀၀ တူးပြီးရေပေးမယ် အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ